Air Couplers Factory, Suppliers |China Air Couplers Vagadziri
● The universal security air coupler inoratidzira kusunungura mweya wakamanikidzwa usati wabatanidzwa.
● Inobvumira mazamu akawanda akatevedzana kuti abatane nemunhu mumwe chete.
● Sleeve yekudzivirira kudzivirira kubuda netsaona uye kukuvara.
● 7 pachinhu chimwe chete chepasi rose chinobvisa kusagadzikana kwekufananidza kuchinjana kuburikidza nekutora zvinomwe zvezvinonyanya kuzivikanwa 1/4” body size air plugs.
● Magadzirirwo epombi ekuchengetedza anobuda ropa kubva pasi pemutsara usati wabvisa chinobatanidza, kudzivirira kurova kwepombi.
● Inopindirana ne7 marudzi makuru emazamu: Industrial (Milton), Automotive (Tru-Flate), ARO, Lincoln, high flow (German type), UK type (Cejn 295, Rectus 19) uye rudzi rweItaly.
● The universal coupler inogadzirwa nesimbi uye aruminiyamu alloy.Simbi yakaoma uye inoshingirira nekuwedzera kukuvara kupikisa pane simbi dzakapfava uye nehupamhi hwekushanda tembiricha.Aluminium alloy inopa yakakwira corrosion kuramba.
● Inoshandiswa kune air compressors, pneumatic tools uye kudonhedza mitsara yemhepo.
● 1/4 saizi yekuyerera kwekutanga
● Kubatanidza rudzi: NPT tambo yemurume, NPT yevakadzi tambo, hose barb.
● Max.kudzvinyirirwa kwemhepo: 120 PSI
● Max.kushanda tembiricha: -20°~ +100°C / -4°~ +212°F
● Chisimbiso Nyaya: Nitrile
● Minimum Order Quantity: 2,000pcs / chinhu
● Chimiro cheindasitiriAir Coupler Plugyakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Mafittings edu anogona kuchinjika nema couplers akafanana akagadzirwa kusvika pachiyero chimwe.
● Aya mazamu emhepo anowirirana neMil spec MIL-C-4109F uye ISO6150-B.
● Inoshandiswa kune air compressors, pneumatic tools, airlines etc.
● Saizi yemuviri inosanganisira 1/4, 3/8 & 1/2.
● Max.kudzvinyirirwa kwemhepo: 300 PSI
● Max.kushanda tembiricha yeduAir Coupler Pluginosvika 120 ℃ kana 250 ℉
● Aya maitiro emaindasitiriQuick Connect Air Couplingsyakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● 6 bhora mabheji anopa kubata zviri nani paunenge uchibatanidza uye sleeve guard inodzivirira kubviswa netsaona.
● Iyo tubular valve mechanism inokurudzira kuyerera kwemhepo.
● Mafittings edu anogona kuchinjika nemapulagi akafanana anogadzirwa kune imwechete mwero.
● Aya mabhatani emhepo anoenderana neMil spec MIL-C-4109F uye ISO6150-B.
● Max.kudzvinyirirwa kwemhepo: 300 PSI.
● Max.kushanda tembiricha yeduQuick Connect Air Couplingsinosvika 120 ℃ kana 250 ℉.
● Nzira yeTru-FlateAir Coupler Plug, inowanzonzi mota dzekuchinjana, yakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Inoshandiswa kune air compressor, pneumatic tools, mvura, girisi, pendi nezvimwe.
● Saizi yemuviri inosanganisira 1/4 uye 3/8
● The Tru-Flate style kanaAutomotive Air Coupleryakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Saizi yemuviri inosanganisira 1/4 & 3/8.
● Max.kushanda tembiricha yeduAutomotive Air Couplerinosvika 120 ℃ kana 250 ℉
● The ARO kana A styleAir Coupler Plugyakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Max.kushanda tembiricha: -40°~ +120°C / -40°~ +250°F
● ARO yeduAir Coupler Pluginowanikwawo mune zvinhu simbi ine zinc plated iyo inoratidzira yakakwira corrosion resistance uye hupenyu hurefu hwebasa.
● TheARO Coupler or A Style Coupleryakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Mabheji ebhora anopa kubata zviri nani kana uchibatanidza uye sleeve guard inodzivirira kudimbura netsaona.
● YeduARO Couplermune zvinhu simbi inowanikwawo pakukumbira.Iyo simbi A Style Coupler ine zinc plated inoratidzira yakakwira corrosion kuramba uye hupenyu hurefu hwesevhisi.
● The Lincoln kana L style mhino refu kuchinjanaAir Coupler Pluginogadzirwa nesimbi yakaoma.
● Lincoln style air fitting ndiwo magumo echirume ekubatanidza seti, anonziwo quick-connect air coupling plugs kana minyatso.Iwo anopinzwa muLincoln air coupler miviri (chikadzi magumo) kubatanidza pneumatic maturusi.Simbi yakaoma uye inoshingirira nekukuvadza kwakawanda kudarika simbi dzakapfava uye kuwanda kwekushisa kwekushanda, uye Zinc-plated finish inopa yakakwira corrosion resistance.
● Iyo Lincoln style air fitting inochinjika neLincoln Interchange's refu stem series.
● Inoshandiswa kune air compressors, pneumatic zvishandiso uye kushandiswa chete mumhepo workshop.
● Kubatanidza mhando: NPT tambo yemurume, NPT yevakadzi thread.
● Nzira yedu yeLincolnAir Coupler Pluginowanikwawo mune zvinhu zvendarira pakukumbira.
● Chimiro cheLincoln kana L chemhino chakareba chinochinjanisa mhepo chakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Lincoln Air Couplerndiwo magumo echikadzi emaseti ekubatanidza, anonziwo kukurumidza-kubatanidza mweya wekubatanidza kana kudzvanywa kwemhepo.Iwo akabatana neLincoln air plugs (chirume magumo) kubatanidza pneumatic maturusi.Lincoln Air Couplermusimbi zvinhu zvinowanikwa.Simbi yakaoma uye inoshingirira nekukuvadza kwakawanda kudarika simbi dzakapfava uye kuwanda kwekushisa kwekushanda, uye Zinc-plated finish inopa yakakwira corrosion resistance.
● TheLincoln Air Couplerinochinjika neLincoln Interchange's refu stem series.
● TheUniversal Air Coupleryakagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani.
● Inobvuma marudzi matatu emazamu: Industrial Interchange, Automotive / Tru-Flate style uye ARO style.
● TheUniversal Air Couplerinobvumira mazamu akawanda akatevedzana kuti abatane nemunhu mumwe chete.
● Mhepo yepasi rose inokwana musimbi inowanika.Simbi yakaoma uye inoshingirira nekukuvadza kwakawanda kudarika simbi dzakapfava uye kuwanda kwekushisa kwekushanda, uye Zinc-plated finish inopa yakakwira corrosion resistance.
Universal Kurumidza Coupler - Industrial, High Flow / European, ARO
● Kuyerera kwepamusoroUniversal Quick Couplerinogadzirwa nendarira yakasimba, iyo ine durability iri nani.
● Inobvuma marudzi matatu emazamu: Industrial Interchange, High Flow / V style kana European style uye ARO style.
● Kuyerera kwepamusoroUniversal Quick Couplerinobvumira mazamu akawanda akatevedzana kuti abatane nemunhu mumwe chete.
● Mhepo yepasi rose inokwana musimbi inowanika.Simbi yakaoma, uye ine yakakwirira kukuvadza kuramba uye yakakura yekushanda tembiricha renji pane simbi dzakapfava.Iyo galvanized surface inopa yakakwirira corrosion resistance.
● The high flow or V styleAir Coupler Plugine kanopfuura ka2 hombe yekuyerera nzvimbo pane yakajairwa maindasitiri ekuchinjana mafittings.Kuwedzera kuyerera kunoguma nekunyanya kushanda zvakanaka kwemidziyo uye kuderera kwemitengo yemhepo.Iwo mazamu akagadzirwa nendarira yakasimba kuti igare iri nani, uye zvinhu zvesimbi zviripo zvakare.Simbi yakaoma uye inoshingirira nekukuvadza kwakawanda kudarika simbi dzakapfava uye kuwanda kwekushisa kwekushanda, uye Zinc-plated finish inopa yakakwira corrosion resistance.
● High flow air hose fittings ndiwo magumo echirume ekubatanidza seti, anonziwo quick-connect air coupling plugs kana nipples.Iwo anoiswa muV chimiro chemhepo coupler miviri (chikadzi magumo) kubatanidza pneumatic maturusi.
● The high flow or V styleAir Coupler Pluginochinjika neGermany style couplings DN7.2 - 7.8, Cejn 320, Legris 25/26, Norgren 234/238, Rectus 25/26, Schrader InterCheck 35.
● 1/4 & 3/8 basic flow size
● Kubatanidza rudzi: NPT tambo yemurume, NPT yevakadzi tambo uye hose barb.